AXDIGII KU MEEL GAADHKA AHAA OO LA ANSIXIYEY
AXDIGA KUMEEL GAARKA
Kaddib markii in muddo ah ay hogaamiyaasha iyo ergooyinka shirka Mbagathi isku maan dhaafsanaayeen Axdiga ku meel gaadhka ah ayeey maalintii Sabtida hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaalidu go’aan wada jir ah ka gaadheen qodobkii ugu khilaafka badnaa ee la isku mari la’aa oo ahaa qodobka 11aad. Heshiiskaas ka sokoow waxay ergooyinku maanta (15/9/2003) u fadhiisteen inay ansixiyaan dhammaan qodobada uu ka kooban yahay Axdiga ku meel gaadhka ahi. Dood gaaban ka sokoow waxay ergooyinku si rasmi ah u ansixiyeen axdiga ay ummadda Soomaaliyeed u dejiyeen oo ahaa hawshii ugu dhibka badnayd ee shirka laga soo maray.
Shucuurta ergooyinka Soomaalida ayaa galabta markii xarunta shirka la fadhiyey aad u sarraysey, qof kastaana waxaa ka muuqtey inuu si weyn u doonayo ansixinta Axdiga oo runtii ahyd caqabadda keliya ee la odhan karo waxay hor taagnayd shirka. Hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida ayaa si midaysan ugu dadaalayey inaysan ansixinta Axdigu galabta dhaafin, taas oo ay si wanaagsan ugu guulaysteen.
Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa carrabka ku dhuftay in qodobkii la isku haystey ay muddo gaaban kaga soo shaqeeyeen, loona baahan yahay in Axdiga la akhriyo, lana ansixiyo. Madaxweynuhu wuxuu xusay in sida iminka qodobka 11aad loo qoray haddii ay cidi ku dulman tahay ay iyaga yihiin, taasna ay u yeeleen tanaasul ay ummadda Soomaaliyeed u sameeyeen. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: “Annagoo danaha ummadda Soomaaliyeed iyo inuu shirku midho dhalo tanaasulkaas iyo hawshaa u samaynay Wallaahay wixii naga hor yimaadda waan iska dhicinaynaa”.
Hogaamiyaashii ansixinta Axdiga ka hadlay waxaa isna ka mid ahaa Maxamed Qanyare Afrax ayaa yidhi: “Haddii qodobkii la isku haystey xalintiisa hogaamiyaasha laga sugayey, waan ka heshiiney, haddii NGO’yada laga sugayeyna haddee NGO”yada iyo gudiga farsamadu si gaar ah ha isu arkeen”. Qanyare wuxuu u duur xulayey laba nin oo kala ah Prof. Gaandhi iyo Jaamac Maxamed Qaalib oo soo jeediyey in dib ansixinta Axdiga loo dhigo balse ay ergooyinku ku oriyeen. Mudane Qanyare wuxuu ku nuux-nuuxsaday sida ay lama huraanka u tahay in maanta Axdiga la ansixiyo.
Guddoomiyaha bulshada rayidka ah Shariif Saalax oo isna munaasabadda ansixinta Axdiga ka hadlay ayaa isna sheegay inay dhamaan ergadu maanta diyaar u tahay inay ka midha dhaliyaan hawshii ay 11ka bilood ku foognaayeen sidaa darteedna loo baahan yahay in Axdiga la ansixiyo. Hogaamiye kooxeedka lagu magacaabo Maxamed Dheere oo isna fagaarihii ansixinta Axdiga ka hadlay ayaa isna isagoo u duur xulaya C/qaasim waxaa hadaldiisii ka mid ahaa: “Horta dal, dad baa dhisa ee shaqsi ma dhiso, qofka la leeyahay ha la sugo hadduu wax dhisi karo dawladi waa soo martay, sidaa darteed waad u jeedaan oo ergada oo dhami waxay doonaysaa in Axdiga la ansixiyo ee ha la ansixiyo”.
Intaa kaddib Guddoomiyaha Gudiga Farsamada ayaa sheegay in miisaanka fadhiga ergadu ansax yahay, waxaana in Axdiga la ansixiyo soo jeediyey dhamaan ergada oo maanta soo buuxisey hoolka shirka, kaddibna si rasmi ah ayeey u ansixiyeen Axdiga loogu talo galay in ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqo.
Ansixinta axdiga kaddib waxaa fagaarihii ka hadlay guddoomiyaha gudiga farsamada IGAD Mudane Kipligat oo sheegay inuu ilmeeyey markii ay hogaamiyaasha Soomaalidu ku heshiiyeen qodobka 11aad. Wuxuu kaloo ergada u sheegay inay ku wada jireen safar culus, wuxuuna yidhi: “waxaan ku wada jirey safar culus, waxaynu ka gudubney Webi weyn oo culus, welina geedigu wuu socdaa, waxaanna jeclahay inaan idin idhaahdo fadlan dib ha u laabanina, gadaalna ha eegina. Intaynu safarka ku jirrana ogaada inay Soomaali oo dhami safarka inagula jirto, Bas ayeeynu la soconaa sidaa darteed ha xidhina albaabada Baska aynu saaranahay, si ay kuwa kale jidka inooga raacaan”. Kipligat oo isga laftiisu galabta aad u qiiraysnaa wuxuu kaloo yidhi: “mustaqbalka ayaatiinka Soomaaliya waxay ku xidhan tahay midnimadiina”.
Mudane Kipligat wuxuu kaloo shaaca ka qaaday inuu isla berri hadday suura gasho bilaabi doono wejigii 3aad ee shirka, wuxuuna ka codsday beelaha Soomaalidu inay ku dadaalaan sidii ay wakhti gaaban hawlaha laga doonayo ugu soo ebyi lahaayeen.
Markii ansixinta Axdiga laga faraxashay ee uu guddoomiyuhu shirkii xidhay dhammaan ergada Soomaalida oo ay hogaamiyaasha siyaasaddu hor kacayaan ayaa socod dabaal deg ah ku maray waddooyinka xerada Mbagathi, waxayna ku dhawaaqayeen eryo ay ka mid ahaayeen Guul, Guul, Soomaaliyeey Toos, Shirkii waa lagu guulaystey Iwm. Kooxo rag iyo dumar ka kooban ayaa ku shirbayey goobo kala duwan, waxaanna halhaysyadii ay ku dhawaaqayeen ka xusuustaa: Ninkii Fiigayo ha Fiigo, Federaal Faa’iido waaye.